Akụkọ - njirimara anwụrụ PE na oke ojiji
N'ime usoro drainage na mmiri, ọkpọkọ bụ akụkụ dị mkpa n'ime ya, yabụ ogo ọkpọkọ na-arụ ọrụ mkpebi. Site na ahụmịhe gara aga, ma e jiri ya tụnyere plastic ma ọ bụ ọkpọkọ ọla, pipụ pipụ nwere njirimara ndị a:
① Obere njupụta, ike dị elu, ezigbo ike;
Ọ na-eguzogide corrosion, dị mfe agba, ma nwee ezigbo mkpuchi ihe.
Construction Okwenye na-adaba adaba, ntinye dị mfe na ngwa ngwa, yana ụgwọ mmezi dị ala.
Dabere na uru atọ a nke pipụ PE, enwere ike iji ya na mmiri na sistemụ mmiri, mmiri ogbugba mmiri n'ubi, njem ịnweta na mines, na kpo oku gas.
Mgbe nghọta dị mkpirikpi banyere uru nke ọkpọkọ PE, ka anyị depụta ọnọdụ ọnọdụ ngwa ya. Na mba ndị mepere emepe na mpaghara ndị ọzọ na mba ọzọ, ọkpọkọ PE nwere ihe karịrị 90% nke pip gas gas e liri na obodo, akụkụ ahịa nke ọkpọkọ mmiri erutela 60%, mba ndị ọzọ ewepụtala ọkpọkọ PE zuru oke. Ọkọlọtọ iwu nkọwapụta. Ka a na-amachibido ọkpọkọ galvanized nwayọ na China, ọkpọkọ PE nwere uru asọmpi na ngalaba nke ịme mmiri. Na ụlọ ọrụ ndị dị ka gas, mmiri mmepụta ihe, nkwukọrịta, na ịgba mmiri mmiri, ọkpọkọ PE na-egosikwa ọganihu ngwa ngwa. Thekpụrụ ọkpọkọ na nkọwapụta edobeghị, nke emetụtala ngwa na mmepe nke ọkpọkọ PE ruo n'ókè ụfọdụ.
E nwere ọtụtụ usoro nhazi maka ọkpọkọ PE, yana ụzọ nhazi dị iche iche dịka ụkpụrụ dị iche iche si dị. Dị ka ebumnuche ahụ si dị, enwere ike kewaa ya na ụlọ na mmiri mmiri na mmiri na mmiri mmiri, ọkpọkọ ikuku gas, ọkpọkọ mmiri na-arụ ọrụ ugbo, ọkpọkọ eriri, ọkpọ mmiri nsị, wdg. ọkpọkọ, aluminium-plastik mejupụtara ọkpọkọ, nchara-plastic mejupụtara ọkpọkọ, nchara-plastic mejupụtara ọkpọkọ, mesikwuru ọkpọkọ, otu / abụọ-mgbidi corrugated ọkpọkọ, gburugburu ọkpọkọ, sịlịkọn isi ọkpọkọ maka ngwa anya Gịnị, wdg. Dabere na njupụta nke akụrụngwa, enwere ike kee ya n'ime ọkpọkọ dị elu, obere tubes na tubes ọkara.